စာချုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ Galaxy Star Winner နေမင်းအိမ်
22 Sep 2017 . 6:13 PM
Galaxy Star 2017 ရဲ့Winner ဆုရှင် နေမင်းအိမ်က အယ်လ်ဘမ်ထုတ်လုပ်ပေးမယ့် Namin Entertainment နဲ့ ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကို ၎င်းဖက်က တရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ ပြောဆိုလာပါတယ်။
“Namin Entertainment နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တရားဝင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။ ကျွန်တော်နဲ့ Namin Entertainment ဟာ ရှေ့လျှောက်ပြီး ဆမ်ဆောင်း၊ အော်ရီဒူးကဖျော်ဖြေရမယ့် Glaxy Star Top Ten Finalist တွေကို စာချုပ်ချုပ်ပေးထားတဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာ အတူတူတွေ့ဆုံမှုကလွဲပြီး ကျန်သောဖျော်ဖြေပွဲတွေ၊ ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေက ကျွန်တော်နေမင်းအိမ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်နဲ့ ရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”လို့ Galaxy Star 2017 ရဲ့ Winner ဆုရှင် နေမင်းအိမ်က ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်က ဆူးလေရှန်ဂရီလာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ Galaxy Star 2017 Winner အား ဆုကြေးငွေပေးအပ်ခြင်းနဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ Training အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာထံ အသိပေးပွဲမှာ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
“အခုကြားနေတာက Top Ten Finalist တွေ ပါဝင်မယ့် အဖွဲ့လိုက်သီချင်းခွေပဲ ထုတ်ပေးမယ်လို့ကြားရတဲ့အပြင် မီနီအယ်လ်ဘမ်အသေးစားပဲ ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။ အမှန်က တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ထွက်ပေးမယ်လို့ အစကတည်းက ပြောထားတာပါ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်က ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်တာက World Star ဖြစ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်မြင်ချင်လို့ပြိုင်ခဲ့တာပါ။ ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်အောင် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပို့ပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီအကျိုးကျေးဇူးခံစားရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဘက်က ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်ရှိတဲ့အတွက် ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မလုပ်ပါဘူး”ဟု နေမင်းအိမ်က ပြောပါတယ်။
Glaxy Star 2017 Winner အနေနဲ့ ဆုငွေကျပ်သိန်းတစ်ထောင်အပြင် တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ထွက်ရှိခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ Stage Show တွေမှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်လို့ ပြိုင်ပွဲမကျင်းပမီကတည်းက ကြေညာခဲ့တယ်လို့ နေမင်းအိမ်က ဆိုပါတယ်။
နေမင်းအိမ်အနေနဲ့ Galaxy Star top ten ပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့အတူ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ သွားရောက်လေ့ကျင့်မှုတွေ ပါဝင်မှုမရှိတော့ဘဲ ပြိုင်ပွဲဝင်များ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါက ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကို Namin Entertainment က ပြုလုပ်ပေးမည်ဆိုခြင်းသည်လည်း စာချူပ်တွင်ပါဝင်သည့်အချက်မဟုတ်ဘဲ အစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေနဲ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“စာချုပ်ဖျက်သိမ်းတာကို သူတို့ဘက်ကကြေညာမလားဆိုပြီးကြည့်ခဲ့ပေမယ့် စောဒကမတက်ခဲ့ပါဘူး။ အမှန်ဆို မီဒီယာတွေရှေ့မှာ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြောင်း တရားဝင်ကြေညာပြီး Winner ဆုကို တရားဝင်လွှဲအပ်ကြောင်းကို စာချူပ်အသစ်တစ်ခုနဲ့ ချုပ်ဆိုလက်မှတ်ရေးထိုးရမှာပါ။ Winner ဆုရတယ်ဆိုတာကို အခမ်းအနားနဲ့ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးလက်ခံရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေက ဒီလိုရေးထိုးရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်”လို့ နေမင်းအိမ်ကပြောပါတယ်။
နေမင်းအိမ်အနေနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်တစ်ခွေကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမှာလို့ပြောကြားခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်မှာ မအူပင်ရှိ အမျိုးသမီးမိဘမဲ့ဂေဟာ၊ ရန်ကုန်မြို့(၉၉)မိုင်(၄)ဖာလုံ အမြန်လမ်းရှိ နန်းရွှေပြည်ဆရာတော် ဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့ “ရန်ရွှေပြည်” မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ အော်ရီဒူးနဲ့အတူ အလှူအတန်းပြုလုပ်မှာဖြစ်သလို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က အဓိဌာန်ခဲ့တဲ့ လွိုင်ကော်က တန်ခိုးကြီးစေတီတစ်ဆူမှာလည်း သွားရောက်လှူဒါန်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။
Galaxy Star 2017 ရဲ့Winner ဆုရှငျ နမေငျးအိမျက အယျလျဘမျထုတျလုပျပေးမယျ့ Namin Entertainment နဲ့ ခြုပျဆိုထားတဲ့စာခြုပျကို ၎င်းငျးဖကျက တရားဝငျဖကျြသိမျးလိုကျတယျလို့ ပွောဆိုလာပါတယျ။
“Namin Entertainment နဲ့ပတျသကျတဲ့စာခြုပျကို ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ တရားဝငျဖကျြသိမျးလိုကျပါပွီ။ ကြှနျတျောနဲ့ Namin Entertainment ဟာ ရှလြေှ့ောကျပွီး ဆမျဆောငျး၊ အျောရီဒူးကဖြျောဖွရေမယျ့ Glaxy Star Top Ten Finalist တှကေို စာခြုပျခြုပျပေးထားတဲ့ဖြျောဖွပှေဲတှမှော အတူတူတှဆေုံ့မှုကလှဲပွီး ကနျြသောဖြျောဖွပှေဲတှေ၊ ဂီတနဲ့ပတျသကျတဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေ ကြှနျတျောနမေငျးအိမျရဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြ၊ ဆုံးဖွတျခှငျ့နဲ့ ရှဆေ့ကျသှားမှာဖွဈပါတယျ”လို့ Galaxy Star 2017 ရဲ့ Winner ဆုရှငျ နမေငျးအိမျက ပွောပါတယျ။
အဲ့ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသကျပွီး စကျတငျဘာ ၂၁ ရကျက ဆူးလရှေနျဂရီလာဟိုတယျမှာပွုလုပျတဲ့ Galaxy Star 2017 Winner အား ဆုကွေးငှပေေးအပျခွငျးနဲ့ ကိုရီးယားနိုငျငံသို့ Training အစီအစဉျနဲ့ ပတျသကျပွီး မီဒီယာထံ အသိပေးပှဲမှာ ပွောဆိုခဲ့တာပါ။
“အခုကွားနတောက Top Ten Finalist တှေ ပါဝငျမယျ့ အဖှဲ့လိုကျသီခငျြးခှပေဲ ထုတျပေးမယျလို့ကွားရတဲ့အပွငျ မီနီအယျလျဘမျအသေးစားပဲ ထုတျပေးမယျလို့ ကွားနရေပါတယျ။ အမှနျက တဈကိုယျတျောအယျလျဘမျထှကျပေးမယျလို့ အစကတညျးက ပွောထားတာပါ။ ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတျောက ဒီပွိုငျပှဲဝငျပွိုငျတာက World Star ဖွဈခငျြလို့မဟုတျပါဘူး။ အောငျမွငျခငျြလို့ပွိုငျခဲ့တာပါ။ ပရိသတျရငျထဲရောကျအောငျ တဈဆငျ့ပွီးတဈဆငျ့ ပို့ပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ဒီအကြိုးကြေးဇူးခံစားရတယျလို့ထငျပါတယျ။ ကုမ်ပဏီဘကျက ပွောငျးလဲမှုအစီအစဉျရှိတဲ့အတှကျ ဘာတုနျ့ပွနျမှုမှ မလုပျပါဘူး”ဟု နမေငျးအိမျက ပွောပါတယျ။
Glaxy Star 2017 Winner အနနေဲ့ ဆုငှကေပျြသိနျးတဈထောငျအပွငျ တဈကိုယျတျောအယျလျဘမျထှကျရှိခှငျ့ရမှာဖွဈပွီး ကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ Stage Show တှမှော ဖြျောဖွခှေငျ့ခြိတျဆကျပေးမယျလို့ ပွိုငျပှဲမကငျြးပမီကတညျးက ကွညောခဲ့တယျလို့ နမေငျးအိမျက ဆိုပါတယျ။
နမေငျးအိမျအနနေဲ့ Galaxy Star top ten ပွိုငျပှဲဝငျမြားနဲ့အတူ ကိုရီးယားနိုငျငံမှာ သှားရောကျလကေ့ငျြ့မှုတှေ ပါဝငျမှုမရှိတော့ဘဲ ပွိုငျပှဲဝငျမြား ကိုရီးယားနိုငျငံမှပွနျလညျရောကျရှိလာပါက ဖြျောဖွပှေဲတဈခုကို Namin Entertainment က ပွုလုပျပေးမညျဆိုခွငျးသညျလညျး စာခြူပျတှငျပါဝငျသညျ့အခကျြမဟုတျဘဲ အစီအစဉျတဈရပျအနနေဲ ပွုလုပျခွငျးဖွဈတယျလို့ ပွောပါတယျ။
“စာခြုပျဖကျြသိမျးတာကို သူတို့ဘကျကကွညောမလားဆိုပွီးကွညျ့ခဲ့ပမေယျ့ စောဒကမတကျခဲ့ပါဘူး။ အမှနျဆို မီဒီယာတှရှေမှေ့ာ စာခြုပျဖကျြသိမျးကွောငျး တရားဝငျကွညောပွီး Winner ဆုကို တရားဝငျလှဲအပျကွောငျးကို စာခြူပျအသဈတဈခုနဲ့ ခြုပျဆိုလကျမှတျရေးထိုးရမှာပါ။ Winner ဆုရတယျဆိုတာကို အခမျးအနားနဲ့ စာခြုပျမှာ လကျမှတျရေးထိုးလကျခံရမှာပါ။ မွနျမာနိုငျငံရဲ့တရားဥပဒကေ ဒီလိုရေးထိုးရမယျလို့ ထငျပါတယျ”လို့ နမေငျးအိမျကပွောပါတယျ။
နမေငျးအိမျအနနေဲ့ တဈကိုယျတျောအယျလျဘမျတဈခှကေို ကိုယျတိုငျထုတျလုပျနိုငျရနျ ကွိုးစားသှားမှာလို့ပွောကွားခဲ့ပွီး စကျတငျဘာ ၂၆ ရကျမှာ မအူပငျရှိ အမြိုးသမီးမိဘမဲ့ဂဟော၊ ရနျကုနျမွို့(၉၉)မိုငျ(၄)ဖာလုံ အမွနျလမျးရှိ နနျးရှပွေညျဆရာတျော ဦးစီးတညျထောငျထားတဲ့ “ရနျရှပွေညျ” မိဘမဲ့ကြောငျးမှာ အျောရီဒူးနဲ့အတူ အလှူအတနျးပွုလုပျမှာဖွဈသလို ၂၀၁၄ ခုနှဈက အဓိဌာနျခဲ့တဲ့ လှိုငျကျောက တနျခိုးကွီးစတေီတဈဆူမှာလညျး သှားရောကျလှူဒါနျးမယျလို့ သိရပါတယျ။
Kristen Stewart တစ်ယောက် အချစ်သစ်တွေ့နေပြီလား
by Naw Hsel Hte .2months ago
ရုံးပိတ်ရက်မှာ Tech နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်ကောင်းတွေ
by Min Than Htike .3months ago
Priyanka Chopra ရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်မသိသေးတဲ့ အချက်များ